Mashruuca Dhismaha Maxjarka Ee Centerka Harre Oo Gabogabo maraya - Cakaara News
Mashruuca Dhismaha Maxjarka Ee Centerka Harre Oo Gabogabo maraya
Jigjiga(cakaaranews )Axad 8da May 2016, Mashruuca dhismaha ee maxjarka oo ay fulinayso Wakaalada dhismaha iibka iyo adeegyada gaar ka ah ee booliska DDSI ayaa maraya 92%. Kaasoo dhismihiisu ku fadhiyo 4 km2 islamarkaana loogu talagalay in uu adeega siiyo 100,000 oo neef oo isagujira Geel, Adhi iyo lo’a.
Hadaba maxjarkan ayaa waxaa shabakada wararka ee cakaaranews uga warbixiyay maareeyaha guud ee wakaalada dhismaha iibka iyo adeegyada gaarka ah ee Booliska mudane Cabdishugri Maxamuud Odowaa oo sheegay in maxjarkan dhismihiisu uu meel wanaagsan oo gabogabo ah marayo islamarkaana ay rajaynayaan in maalin dhaw xadhiga laga jari doono. Wuxuuna intaa kudaray maareeyuhu in maxjarkani uu faa iido balaadhan ku soo kordhin doono Dalka iyo deegaankaba maadaama uu yahay maxjar aad u wayn oo qaadi kara 100,000 oo neef. Kaasoo siin doona xoolaha adeeg caafimaad iyo waliba adeegii calafka iyo naaxinta. Ugudanabayna wuxuu xusay masuulku in maxjarkani uu dabooli doono in badan oo ah baahidii dhanka maxjar la’aanta ee bulshada DDSI.
Sidookale waxaa isna dhinaciisa kawarbixiyay Site-managerka Mashruuca Dhismaha Maxjarka mudane Cabdinaasir Huruufe oo sheegay in mashruucani uu ka kooban yahay qaybo badan oo kaladuwan kuwaas oo kala ah xerooyinkii xoolaha, baraagihii biyaha, Guryihii jiifka ee dhakhaatiirta xoolaha, guryihii jiifka ee shaqaalaha maxjarka iyo goobihii dawaynta iyo naaxinta xoolaha. Wuxuuna intaa kudaray in maxjarkani markuu dhamaado uu dad farabadan oo deegaanka ah shaqo abuur u samayn doono.